Sida loo aqbalo oo looga tago wixii aad soo martay
Srinivas Rao Founder of The Unmistakable Hal-abuurka podcast, qoraa buugaag ku saabsan hal-abuurka.
Ha la dagaalamin niyad jabka iyo xanuunka
Waxaan inta badan dibadda ka raadinaa jawaabaha su'aalahayaga: buugaagta iyo podcasts, tababarrada iyo siminaarada, oo leh lataliye iyo macalimiin ruuxi ah. Laakiin tani had iyo jeer ma caawinayso inaad fahamto hamigaaga, goor dhow ama hadhow waxaad u baahan tahay inaad eegto gudaha naftaada.
Marka sidaas la sameeyo, niyad jab iyo xasuus xanuun badan ayaa si lama filaan ah u soo bixi doonta. Waxaad doonaysaa inaad ka cararto iyaga, laakiin waa inaad wejiga ka eegto. Kadibna waxaad ogaan doontaa is-barbar-dhiggan oo kale: inta badan ee aad la halgameyso xanuunka, wax badan ayaad siinaysaa xoog. Oo markii ugu dambeyntii aad ka baxdo halgankan, wuu fududaanayaa.
Tani waa arrin adag. Baahida in la is-dhiibo waxay lid ku tahay wax kasta oo si joogto ah naloo baro: ku dadaal, riix, adkaysta, guulaysta. Laakiin markaan quusano, waxaan helnaa nabad iyo dhiirigelin. Tanina la mid ma aha in aad iscasisho oo aad ku dhacdo naxariis darro.
Oo waxaad ku noolaan kartaa nolol macno leh oo keliya xaaladdan xorriyadda iyo is-muujinta iyada oo aan sabab loo helin. Faham in niyad-jabka iyo xanuunka ay yihiin qayb dabiici ah oo nolosha ka mid ah. Ha ka cabsan iyaga. Haa, waxaad heli kartaa qalbi jab, waxaa lagaa eryi karaa shaqadaada, mashruucaaga hal-abuurka ah wuu fashilmi karaa.
Laakin waxa aad jidka ku barato ayaa kaa caawin doona in aad koraan oo aad noqoto qof ka duwan. Sida kaliya ee aad uga fogaan karto niyad-jabka waa inaadan waligaa khatar gelin. Laakiin waxay noqon doontaa nolol aad u xaddidan.
Wax Wanagsan Ka Hesho Hore
Sida caadiga ah, marka aan dib u soo celinno waayo-aragnimadii xumaa ee hore, sida xiriirka aan shaqeynin ama shaqo la'aanta, waxaan diirada saarnaa xumaanta oo ma ogaanno wanaagga. Waxaan sidnaa xumaantan, mustaqbalkuna wuxuu la mid noqonayaa kuwii hore. Laakiin haddaad qirataan wixii dhacay oo aad wax ka barataan, xooggiisa ayaa idinka dhammaan doona.
Tusaale ahaan, buugaagta is-caawinta waxay kugula talinayaan inaad wax fiican ka qorto qof kasta oo ku tuuray. Waxaana taladan lagu dabaqi karaa xaalad kasta oo xanuun badan. Qor wixii wanaagsan oo aad xaaladda ka baratay, waxaad baratay, waxaad naftaada ka baratay. Oo waxaad arki doontaa, in kasta oo xanuunka, dadka ku xeeran ay na siiyaan hadiyado cajiib ah.
Markaan aqbalno xaalad adag ama aan iska deyno xanaaqa aan u qabno qofka na xumeeyay, waayo-aragnimada xun waxay lumiyaan gacantooda iyo mustaqbalkeena.
Naftaada ku caawi in aad dib u saxdo
Markaad iska dayso wixii hore, waxaad u abuurtaa boos mustaqbal cusub. Oo markaad ku dhegganaato diidmo hore, waxay u badan tahay inaad ku celceliso khaladaadkii hore. Waxaan fahamsanahay in ficil ahaan waxaas oo dhan ay ka adag yihiin erayada. Gaar ahaan marka aad hadda ka soo kabsatay xanuunka ama aad weli isku dayayso in aad xakamayso duufaanka noloshaada. Sidaa darteed, waxaan ku siin doonaa talooyin i caawiya:
Baro inaad u mahadceliso.Tani ma xallin doonto dhammaan dhibaatooyinka, laakiin waxay kaa caawin doontaa inaad bedesho maskaxda. Waxaad ogaan doontaa waxyaabaha wanaagsan ee nolosha ee aad sida caadiga ah u qaadanayso run.
Bedel deegaankaaga.Waxay si weyn u saamaysaa dareenka iyo dhaqanka. Muhiim ma aha in la gubo wax kasta oo la xidhiidha waayihii hore (inkastoo mararka qaarkood aad rabto) .U ogolow deegaankaagu inuu shakhsiyeeyo wax kasta oo aad rabto inaad noqoto, ee maaha sidii aad markii hore ahayd.
La hadal daaweeyaha.Waxay iila muuqataa in tan la sameeyo ugu yaraan hal mar inta lagu jiro nolosha. Daaweeye cilmi nafsigu waa tababare, maaha oo keliya jidhka, laakiin maskaxda. Waxay kaa caawin kartaa inaad ogaato qaababka soo noqnoqda ee noloshaada. Isaguna waa ujeedo, wax walba waa loo sheegi karaa, isagoo og inuusan xukumi doonin.
Is ogow naftaada.Naftaada ula dhaqan wax lagu raaxaysto si aad u xidho cutub ka mid ah noloshaada oo aad bilowdo mid kale. Oo si joogto ah u daryeesho xasilloonida maskaxdaada. Tusaale ahaan, gal ciyaaraha, safar, bilow hiwaayadaha cusub.
Bal qiyaas fursadaha kuu furmi kara
Dhacdo kastaa waxay leedahay saddex xaaladood:
Midka aan u malaynaynay.
Midda hadda jirta.
Midka uu noqon karo.
Marka xaqiiqadu aanay ku habboonayn malo-awaalka, waan xanaaqnaa. Waxaan isku daynaa inaan iska xirno dhammaan fursadaha kale waxaanan isku daynaa inaan fulino rajooyinka aan la fulin. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdan oo kale, waxaa lagama maarmaan ah in la aqbalo xaaladda saddexaad, hubanti la'aan. Caadi ahaan waxaan la xiriirnaa cabsi, walaac, iyo cabsidayada ugu xun. Oo ma aragno waxyaalaha yaabka leh ee sidoo kale dhici kara.
Waxaan xusuustaa sida ay iigu muuqatay in aan ku jiro xaalad aad u xun oo xagga xirfadda ah: Waxaan ka qalin jabiyay jaamacada iyada oo ay ku jiraan dhibaatada dhaqaale ee adduunka, boos ma helin ka dib tababar xagaa ah. Laakiin waa tan igu riixday inaan bilaabo waxa hadhow noqon doona saldhigga podcast-kayga.
Waxa aan bilaabay in aan wax qoro aniga oo madax-banaan, laakiin 2013 kii waxa iga diiday kuwii aan la shaqayn jiray. Waqti ayaan sii daayay, ugu dhakhsaha badana waxaan daabacay buuggii ugu horreeyay nafteyda. Waxay noqotay iibsiyaha ugu wanaagsan, waxaanan helay dalab ka yimid daabacaha.
Waad ku mahadsan tahay dhacdooyinkaas, waxaan ka nastay shaqada aad u baahan tahay inaad wax ka qorto waxa aadan dan ka lahayn. Dabcan, marka hore, leexashada noocan oo kale ah waa niyad jab iyo cabsi. Laakin isku day in aad u eegto fursadaha, ee ha u eegin khasaare.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Sida loo aqbalo oo looga tago wixii aad soo martay!